အကြင်နာနန်းတော်: Virtual Drives လေးပါ
Myo tz: အကိုရေ.. virtual drive software က mediafire နဲ့ တင်ထားတော့ download လုပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျ။တခြားဟာနဲ့ တင်ပေးလို့ ရရင်တင်ပေးပါလားခင်ဗျ။
တစ်ချို့ Software တွေက Installလုပ်ပြီးရင် Installer[CD]မပါလည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ တစ်ချို့က အသုံးပြုတိုင်း Installer[CD]ကို CD Driveမှာ ထည့်ထားရပါတယ်။ ဥပမာ - Dictionaryတစ်ချို့၊ Gameတစ်ချို့။ အဲဒါမျိုးကို CD Driveဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက် မလုပ်ဘဲ၊ CD Driveမရှိဘဲ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Virtual Driveက အသုံးဝင်ပါတယ်။ CD Driveအတုပေါ့။
စမ်းကြည့်မယ်၊ လက်တွေ့ အသုံးချမယ်ဆိုရင်
Virtual Drive(8 or 9)ကို Downloadယူပါ။
Virtual Driveကို Installလုပ်ပါ။
. . . . . Buildဆိုပြီး Installer Softwareတစ်ခုလုံးကို ကွန်ပျူတာထဲထည့်ပါ [မိနစ်အနည်းနယ်/(လူကြီးမင်း ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာအပေါ် မူတည်ပြီး) နာရီပိုင်းအထိ အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။]
Insultဆိုပြီး Software Installerကို CD Driveအတုထဲထည့်ပါ။ [ဘယ်ကွန်ပျူတာမဆို စက္ကန့်/မိနစ်ပိုင်း အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။]
ဒါဆိုရင် အသုံးပြုတိုင်း Installerကို CD Driveမှာ ထည့်ထားရတဲ့ Softwareမျိုးကို CD Drive (အလုံအလောက်) မရှိလည်း Hard Disc အားကိုးနဲ့ ခပ်တည်တည် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ခက်နေတယ်ဆိုရင် . . . အကြင်နာနန်းတော်မှာ အကူအညီတောင်းပါ။
အရင်ဆုံး Downပြီး စမ်းကြည့်ဖို့။
- Virtual Drive 8
- Virtual Drive 9